Maitiro Ekutora Yakanyanya Kukodzera Kufambisa Wiricheya
Paunenge wafunga kuti kufamba wiricheya ndiyo mhando yakanakisa ye wiricheya yemamiriro ako, iwe uchafanirwa kugara uchifunga zvinhu zvinoverengeka zvakasiyana. Unogona kunge wakasangana ne wiricheya iyo yakareruka kwazvo, yakasimba, uye yakagadzirwa zvakanaka, asi inofanirwa kutora nhengo dzese dzemuviri wako kuti dzihwine.
Izvi zvinoreva kuti iwe unofanirwa kuyedza kutora chigaro chinokwana zviyero zvako zvizere, kwete zvishoma chete. Izvi ndezvekuona kuti iwe unozogona kushandisa cheya pane kwenguva yakareba musingatombo kunetseka nezvezvinhu zvinoenda zvisirizvo panguva yaunoshandisa.
Kufamba wiricheya inofanirwa zvakare kuve nyore kukwana mumotokari yako. Izvi zvinodaro nekuti "kufamba" wiricheya yakagadzirirwa kutakurwa zuva rese.
Chigaro Chakagadzwa Ruzivo
Chigaro chechigaro chakakosha kwazvo chikamu chechigaro chekufambisa. Chigaro chigaro chinowanzo gadzirirwa kuve chakareruka, chakapetwa zvakanyanya, uye chakasimba zvakakwana kuti zvidzivirire kutenderera nacho zuva rako rese. Sezvo chigaro chakagadzirirwa kuve chakareruka, chinenge chisina kana padding pane chigaro upholstery.
Mamwe mafuremu echigaro anouya nechigaro chechifuramabwe chinogadziriswa, zvichireva kuti iwe unokwanisa kugadzirisa kukakavara kwetambo kuti ikwane pahupamhi hwemuviri wako.
Footrest kana Legrest Rudzi
Kufamba wiricheya dzimwe nguva inenge iine bhende rechitsitsinho rinopetwa iro rinokutendera kuti uchengete makumbo ako munzvimbo kudzivirira kuipa. Dzimwe nguva mabara ekutsigira anouya nehurefu hunogadziriswa ficha iyo inobvumidza iwe kugadzirisa iyo bar kumusoro uye pasi.
Kune vanhu vakapfupika kupfuura avhareji, chitsitsinho chitsigiro bhaa inogona kunge yakanyanya kukwirisa uye inogona kunge isinganyatso kudzivirira kuipa, mune iyi mhando yemamiriro ezvinhu iwe ungangodaro unotarisa mune chechechi yekufambisa chair senge imwe nzira.
Nekufamba wiricheya iwe uchaona kuti kune maviri marudzi etsoka dzekutsika. Iwe unogona kana kuwana yakajairwa imwe-kuboora tsoka yekukwirisa tsoka dzako, kana iwe unogona kuwana iyo mhando yakafanana neyakajairwa. wiricheya yemawoko, 2 chidimbu chetsoka. Zvinoenderana nezvawakajaira uye kuti urikuda here kuenda ne 1-chidimbu chetsoka.